တရားခွင် အတွင်း ထွက်ဆိုချက်ကို မီဒီယာသို့ မမှန်မကန် ပြောဆိုသည့် မည်သူ့ကို မဆို တရားစွဲမည်ဟ? - Yangon Media Group
တရားခွင်အတွင်းထွက်ဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍မီဒီယာများအား မမှန်မကန်ပြောဆိုသူမည်သူ့ကိုမဆို တရားစွဲဆိုသွားမည်ဟု ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုမှ စွပ်စွဲခံဇေယျာဖြိုးက ပြောသည်။ မတ်လ ၁၅ ရက်ရုံးချိန်း၌ ဇေယျာဖြိုးက တရားခွင်ကြားနာမှုအပြီး မီဒီယာများအား ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီပိုက်ဆံသိန်းတစ်ထောင်ဆိုတာကနည်းတဲ့ ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်သာ တကယ်ပေးခဲ့ရင် အကောင့်တွေနဲ့မပေါ်ပေါက်စရာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအမှုနဲ့ ကျွန် တော်နဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ မဟုတ် မဟတ်တွေ မီဒီယာတွေကို ထပ်ပြောလာရင် သူတို့ကို ကျွန်တော်တရားစွဲတော့မှာ။ ကျွန်တော့်ကိုမီဒီယာ တွေကို ဒီပိုက်ဆံတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုပြီး မဟုတ်မဟတ်တရား ရုံးမှာပေါ်ပေါက်ချက်မရှိဘဲ သူတို့က ပြောပြောနေတာ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ဇေယျာဖြိုးသည် တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင်နှင့် အပေါင်းအသင်း ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့ကြောင်း အမှုစစ်ရဲအရာရှိရဲမှူးတင်မောင် ဆွေက တရားစွဲတင်ခဲ့သော်လည်း မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ပြန်ခေါ်သက်သေအဖြစ် ရဲမှူးတင်မောင်ဆွေအား စစ် ဆေးသည့်အခါ ၎င်းအနေနှင့် မသိရှိဟု တရားခွင်အတွင်း ထွက်ဆိုခဲ့ ကြောင်း တရားလိုပြရှေ့နေဦးခင် မောင်မြင့်က မီဒီယာများအား ပြောသည်။
ယင်းသို့ထွက်ဆိုမှုအပေါ် ရှေ့ နေဦးခင်မောင်မြင့်က ”ရဲစွဲတင်လာ တဲ့ကိစ္စဟာ ရဲကိုဘယ်သူပြောသလဲ။ ဘာကြောင့်စွဲတင်လာသလဲ။ သက်သေအထောက်အထားရော ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိရဲ့လားဆိုတာ အဲ့ဒါသူနဲ့ရှင်းရမှာ။ ရဲမှူးတင်မောင်ဆွေက သူ့ကိုတရားခံထဲထည့်ပြီး အမှုစွဲတင်လာတာလေ။ ဦးတင်မောင် ဆွေကိုမေးသင့်တယ်။ ဘယ်လိုကိစ္စ မျိုးနဲ့ဘယ်နေရာ ဘယ်ဘဏ်က နေလွှဲတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ကျွန် တော်တို့လည်းမမြင်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အမှုစစ်ကြီးက တင်လာသလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့သိနေတာကတော့ အောင်ဝင်းခိုင်နဲ့ဇေယျာဖြိုးနဲ့က အလုပ်အတူလုပ်နေတယ်။ ဒါကိုဦးဝင်း ဇော်ထွန်းကလည်း ရှေ့မှာထွက်ထားတာရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။ ယနေ့ရုံးချိန်းမှာ (၄၉) ကြိမ် မြောက်ဖြစ်ပြီး ပြန်ခေါ်သက်သေ ခုနစ်ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာ လေးဦးသာကျန်ရှိတော့ပြီး မတ် ၁၆ ရက်၌ ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေစကားမြတ်စွာ ဘုရားပွဲတော်နှင့် နှစ် ၃ဝ ကျော်ကြာ ရပ်နားထားခဲ့ရသည့် လောင်းလှေပြိုင်ပွဲ စတ??